Fitànana An-tsoratra Avy amin’ny Fijerin’ny Vahoaka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Febroary 2017 15:38 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Ελληνικά, Български, Français, عربي, Español, македонски, 繁體中文, English
Ny endrik'ireo nandray anjara tamin'ny hetsi-panoherana Tsy Mila Mandràra Silamo tao amin'ny Kianja Lafayette, ao Washington D.C., 28 Janoary 2017. Sary: Ivan Sigal
Nivoaka ny tranony ireo mponina tao Washington D.C. tamin'ny Alahady maraina lasa teo. Nandeha an-tongotra, nitaingina bisikilety na nandray fiara fitaterana ho any amin'ny Kianja Lafayette, teo anoloan'ny Trano Fotsy, hanao hetsi-panoherana tampoka nifanindran-dàlana tamin'ireo hetsi-panoherana hafa nanerana an'i Etazonia hanoherana ny didim-panjakàna nataon'i Trump handraràna tsy hiditra any Etazonia ireo mpifindramonina, ireo manana visa ary ireo mpitady fialokalofana avy aminà firenena fito.
Olona 5.000 eo angamba, toa tsy zatra loatra amin'ny fanaovana hetsi-panoherana. Taminà toerana tery kely teo anelanelan'ny fefin'ny fanokanana filoham-pirenena tamin'ny faran'ny herinandro lasa, niaraka tamin'ny fanahin'ny tsy fiomanana nikarakaràna azy, no nanombohan'ilay hetsika—niainga avy ao amin'ny pejy Facebook, avy eo niely tamin'ny media sosialy ary dia niseho vatana no niafaràny.
Noho ny tsy fisian'ny lampihazo na mpitarika mazava, nifampijerijery nitady toromarika ny tsirairay. Nisy fanetsehana diabe fa tsy famoriana olona tapakevitra momba izay tokony hataony, teo an-toerana. Olona nivoaka avy any anaty akoran'ny media sosialy no eto, avy aminà vondrom-piarahamonina voafaritry ny sokajin'asa, sekoly ary tonga anaty toerana iray tena sivily tanteraka. Nisy ny honohono nilaza fa nanatrika tao ireo mpitarika politika, saingy tsy hita sady tsy re teny amin'ireo toerana mba tongako izy ireny. Fa kosa, nifampiraharaha tamin'ireo teny akaikiny teny ny olona, momba izay toerana na zotra haleha. Ary angamba, noho ity andian'olona marobe ity tsy nampiraisin'ny fotokevitra fikarakarana tokana fa noho ny filàna maneho fanoherana fotsiny, ny ankamaroan'ireny fifampiraharahàna ireny dia natao am-pahanginana, miaraka amin'ny fitopin'ny fijery sy fihetsika mety miseho eo.
Tezitra angamba ry zareo, na tapa-kevitra ary niainga avy any anatin'ny vahoaka tany ireo hiaka “Henatra”, “Tsy mila fandraràna, tsy mila rindrina” ary “Tsy mila fankahalàna, tsy mila tahotra, raisina an-tànandroa ireo mpialokaloka eto”, tsy mbola nahatratra ny haavo na fifohazana mety ho raisina amin'ny fomba diso hoe herisetra. Satria nifatratra tao amin'ny toerana tao ambadika ireo vahoaka, nandray andraikitra ny sasany hanambara ny diabe mankany Pennsylvania Avenue, ho an'ny amin'ny Trump International Hotel, ary avy eo ho any amin'ny Capitol. Vaky ny vay, ary dia nanomboka nihisaka izahay.